Mpanamboatra sy mpamatsy herinaratra fibre | China Fiber Optical Amplifier Factory
Endri-javatra 1.Adopt JDSU na Oclaro paompy laser 2.Adopts OFS fibre 3.SMT dingana famokarana hanome toky ny habe kely sy ny herinaratra ambany comsuption, fa ny fahamarinan-toerana avo 4.Micro auto monitor PCB 5.Output azo ovaina (-4 ~ + 0,5) 6. Max outputs 23dBm (single pump laser) Diagram Underside ： Upside (Unit ： mm) Pin Assignment PIN # Name Description Note 1 + 5V + 5V mpamatsy trosa 2 + 5V + 5V mpamatsy tompona 3 + 5V + 5V mpamatsy tompona 4 + 5V + 5V mpamatsy vola 5 Reserve No Connection ...
ZOA1550HW andian-tsarimihetsika maodely tokana EDFA dia miavaka amin'ny tabataba ambany, ny fahamendrehana avo lenta. Ny CWDM vita an-tsakany sy an-davany nampifangaro ny angon-drakitra 1490nm / 1310nm avy any amin'ny OLT sy ONU ho fampitana fibre tokana amin'ny alàlan'ny EDFA, mampihena ny isan'ny singa ary manatsara ny fahombiazan'ny rafitra sy ny fahamendrehana. Manolotra vahaolana malefaka sy mora vidy izy io ho an'ny fandrakofana faritra lehibe CATV amin'ny tanàn-dehibe sy tanàna antonony. Andian-tsarimihetsika ZOA1550HW dia feno APC, AGC, fanaraha-maso ATC vita, famolavolana tena tsara ho an'ny ...
Ny amplifier erbium-doped fibre (EDFA), noho ny tabataba sy ny cascades emission spontan (ASE), ny fanangonam-peo amin'ny emission spontaneous, dia hampihena be ny SNR an'ny mpandray ny rafitra, noho izany dia mametra ny fahaizan'ny rafitra sy ny halaviran'ny tsy famindrana. Ny taranaka vaovaon'ny Raman fibre amplifier (ZRA1550) dia manatratra ny fanamafisana ny signal optika amin'ny tombam-bidin'ny optika ateraky ny Stimulated Raman dispersing (SRS). Ny FRA dia manana karazan-java-bidy betsaka; ny fatran'ny bandwidth dia azo itarina amin'ny ...
ZOA1550W andian-dahatsoratra 1550nm Erbium Doped Fiber Amplifier (ivelan'ny varavarana) dia natao ho an'ny fangatahana voapetraka, dia mandray 980nm na 1480nm avo lenta, fitokana-monina optika, ny DFB, laser DFB fampangatsiahana thermoelectric novokarin'i JDS-U, Fujitsu, Nortel, Lucent, Fitel ary hafa orinasa semikonduktor malaza eran-tany ho loharano mitroka. Ao amin'ny atin'ny masinina dia misy fantsom-pamokarana herinaratra optika output ary fitaovana fanamafisam-peo laser thermoelectric, fizarana fifehezana ny mari-pana mba hiantohana ny opt ...
Ny modely ZOA1550MB CATV EDFA dia mandray ny kinova mahazatra ho an'ny Channel tokana sy ny fantsom-pifandraisana. Ny EDFA dia misy laser paompy mangatsiaka, monitor input ary isolator input, monitor monitor ary output isolator, fonosana 90X70X20mm habe kely. Ampifandraisina amina mpampiasa 30-pin interface tsara ahafahan'ny fitaovana mifampiresaka amin'ny elektronika fanaraha-maso. Endri-javatra (1) kalitao avo lenta: mampiasa laser laser pump 980nm iraisampirenena, rindrambaiko namboarina ho an'ny herinaratra, tombony ary fisaka, izay manome antoka ny ambany NF sy ...
ZOA1550H EDFA dia mandray an'i JDSU, Lumics ary orinasa semiconductor malaza manerantany ho loharanom-paompy. Ao amin'ny atin'ny masinina dia misy fantsom-pamokarana herinaratra optika output ary fitaovana fanamafisam-peo thermoelectric laser, fizaran-tany fanaraha-maso ny mari-pana mba hiantohana ny fahombiazan'ny milina sy ny fitoniana maharitra amin'ny laser. Ny rindrambaiko microprocessor dia manara-maso ny toetran'ny laser, ny efijery VFD dia mampiseho ny masontsivana miasa. Raha vao ny masontsivana amin'ny laser miasa de ...
Famaritana momba ny vokatra ZOA1550 andian-dahatsoratra azo esorina amplifier erbium doped fibre dia natao ho an'ny tambajotra CATV. Noho ny halavan'ny andalovan'ny EDFA 1550nm, mifanaraka amin'ny tarika ambany fatiantoka, ary ny teknolojia efa somary matotra dia be mpampiasa. Izahay dia mandray JDSU, Fitel ary orinasa semiconductor malaza eran-tany dia namokatra paompy 980nm na 1480nm, izay misy linearity avo, fitokana-monina optika, hevitra mizara, laser DFB fampangatsiahana thermoelectric. Ny EDF ...